Indawo: Ikhaya » Ukuthumela » Industry Hospitality Industry » Ukutholwa Okusha Kokuhamba Kuthatha Inguquko
Unyaka ka-2022 uzobona inqubekelaphambili ebheke ekululameni njengoba imboni yamahhotela isabela ezidingweni ezithuthukayo zesivakashi "esisha".
Amahhotela azodinga ukubona kusengaphambili kanye nokuvumelana nezimo ukuze akwazi ukuphatha
ukuntengantenga okuqhubekayo. Kodwa izinselelo zeminyaka edlule zilungiselele amahhotela kahle ukuze abambe amathuba angaphambili.
Izimfuno nezifiso zesivakashi esisha zinomthelela kumahhotela njengoba ebeka izinto ezibalulekile ezibalulekile futhi agxilisa izinsizakusebenza kanye nokutshalwa kwezimali ukuze kufezeke ngempumelelo izidingo zezivakashi. Ngo-2022, ukwakha kabusha abasebenzi, ukuphindaphinda kabili ekuzinzeni, kanye nokucabanga kabusha ukwethembeka kuzoba yizindawo ezibalulekile zamahhotela afuna ukuhlobana nesivakashi esisha.
Ukwakha kabusha Abasebenzi Behhotela Besikhathi Esisha Sokuvakasha
Izinselelo zabasebenzi zikhinyabeze ukubuyela esimeni esijwayelekile emahhotela amaningi ezweni lonke, okwenza kube nzima ukubhekana nezidingo ezikhulayo. Ngenkathi cishe yonke imboni yaba nokushoda kwezisebenzi ngonyaka odlule, ukushoda bekushubile ikakhulukazi emahhotela ngenxa yokudilizwa kobhubhane kanye negagasi labantu abashiya ngokuzithandela, imvamisa ukuthola amathuba kwezinye izimboni.
Imiphumela yocwaningo lwamalungu e-AHLA ka-Okthoba 2021 iveza ukuthi isimo sibi kangakanani manje.
Cishe bonke (94%) abaphendulile bathi amahhotela abo anabasebenzi abambalwa, okuhlanganisa nama-47% abathi abanabasebenzi kakhulu. Ngaphezu kwalokho, u-96% wabaphenduli bayazama ukuqasha kodwa abakwazanga ukugcwalisa izikhundla ezivuliwe.
Njengoba imboni yamahhotela iqhubeka nendlela yokusimama ngo-2022, ukwakhiwa kabusha kwethalente kuzoba semqoka ekuhlinzekeni izidingo zesihambi esisha. Phela, i
imboni kulindeleke ukuthi iphele ngo-2022 yehle abasebenzi abayi-166,000 uma kuqhathaniswa no-2019.37.
Ukuqasha abasebenzi kuzoba nzima kakhulu kuzo zonke izimboni eziningi
Izindaba ezinhle ukuthi likhona ithuba lokuheha nokugcina abasebenzi abasha
izindlela. Lokhu kungasho ukwakhela phezu kwemizamo ekhona yokufundisa abantu ngakho konke
izindlela ezithokozisayo zemisebenzi nokuhlinzeka ngokuthuthukiswa komsebenzi kanye nokuqeqeshwa kwamakhono afanele.
Amakhandidethi anamuhla anendaba nezindlela zomsebenzi, amalungiselelo omsebenzi avumelana nezimo, nokuqeqeshwa kwamakhono okubagcina beqasheka esikhathini esizayo. Amahhotela aphinde abe nethuba lokuqinisa ukuhlukahluka kwawo kanye nezinqubo zokuhlanganisa, ukukhuthaza imisebenzi yabantu bemibala nabesifazane kanye nokuqinisekisa ukuthi abasebenzi kuwo wonke amazinga bahlukene njengezivakashi zabo.
Ukuphinda kabili Ukusimama Kwabantu Neplanethi
Njengoba abavakashi abasha bebheka ukwenza ibhizinisi ngemikhiqizo yamahhotela ehambisana nenjongo yabo siqu, ukuzibophezela kwamahhotela ekuzinzeni kuzoba nomthelela omkhulu ezinqumweni zokuthenga. Inhlolovo yakamuva yomhlaba wonke yabahambi iveza ukuthi izindawo ezintathu eziphezulu abathengi abacabanga ukuthi izinkampani zokuvakasha kufanele zigxile kuzo kule ndawo ukuncishiswa kokukhishwa kwekhabhoni, ukugaywa kabusha, kanye nokunciphisa imfucuza yokudla. Futhi banentshisekelo ezenzweni ezibhekana namapulasitiki asetshenziswa kanye, imfucuza yamanzi, nokongiwa kukagesi.
Njengoba abanikazi bamahhotela besazizwa ingcindezi yomnotho owubhubhane kanye nesidingo sokubeka phambili ukusetshenziswa kwemali ezintweni eziyisisekelo zokugcina ibhizinisi lisebenza, ukutshala imali ekusimameni kungase kubonakale njengento ebaluleke kakhulu kancane.
Nokho amahhotela akudingeki akhethe phakathi “kokwenza okulungile” nokwenza into ehlakaniphile ngokwezimali uma kuziwa ekuzinzeni.
Umgomo uwukuhlanganisa ukutshalwa kwezimali okusimeme kanye nembuyiselo yezezimali ukuze kweqe izindleko ezilula zokuthobela. Ukutshala izimali ezinhlelweni ezihlangene, ezixhunywe ngokucacile, futhi ezinikeza abanikazi imbuyiselo eqinile yezezimali—kungaba ngokuklama kwamahhotela aluhlaza, ukushayela amandla okusebenza kahle ngezinhlelo zokwakha, noma ukuzibandakanya ezivumelwaneni zokuthenga amandla avuselelekayo egameni lama-franchise—kuzokhula kube umthetho kunalokho. kunokuhlukile njengoba abahambi abasha bethambekela kumikhiqizo ekwazisa ukusimama nokuzibophezela komphakathi.
Ukucabanga Kabusha Ubuqotho Ngaphandle Kwamaphuzu
Izinhlelo zokwethembeka eziqondise izidingo zabahambi bebhizinisi futhi ezisekelwe ngokuyinhloko emaphuzwini anqwabelene zizoncipha kakhulu. Okubalulekile manje izinhlelo zabantu abahamba kancane nangezinjongo zokungcebeleka. Iphuzu elibalulekile: NgoSepthemba 2021, u-41% wabahambi e-United States ubevakashele umndeni nabangane, kanti u-41% ubevakashele. Bangu-8% kuphela abebesohambweni lwebhizinisi, kanti u-6% ubeya emhlanganweni noma ingqungquthela ehlobene nomsebenzi.
Iqiniso liwukuthi izinhlelo zokwethembeka ezisekelwe ezikhathini zohambo azihambisani nokuziphatha komhambi omusha kanye nemvelo efunwayo ecindezelwe. Futhi njengoba isidingo sikhula ezinyangeni neminyaka ezayo, inhlanganisela yebhizinisi nokuvakasha kokungcebeleka izoshintshwa unomphela, futhi izinhlelo zokwethembeka kufanele zihambisane nokuziphatha kwamanje kwabahambi ukuze bazibandakanye ngempela.
Amahhotela abuyisela izinhlelo zokwethembeka kushintsho lwamaphethini esidingo esisha asesimweni esingcono kakhulu sokwakha ukwethembeka. Lokhu kusho ukubala imodeli yesipiliyoni, imodeli yedatha, nemodeli yebhizinisi. Zonke lezi zingxenye zisebenza ndawonye ukuze zenze izinhlelo zokwethembeka ezisekelwe ezidingweni zomuntu kuyilapho zisekela izici zokusebenza zokulethwa kwazo.
Ihhotela Ukusimama I-united states Abasebenzi
I-Vinyl Electrical Tapes Market Outlook Cover New...
Ezokuvakasha eMpumalanga Ephakathi: Ukutshalwa kwezimali, imibono emisha, ubuchwepheshe...